Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Lucuc na -agbasa » Saint Lucia melite na Ajọ Ifufe Elsa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Resorts • Safety • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Na Fraịdee, Julaị 2, Otu 1 Hurricane Elsa gafere agwaetiti Saint Lucia. Nchọpụta iji chọpụta ogo mmetụta dị na agwaetiti a emeela kemgbe oke mmiri ahụ gafesịrị.
Oké ifufe ahụ emebighị nnukwu mbibi nke akụrụngwa ndị njem.
E nyere iwu doro anya All Clear na 9: 45pm na July 2 site n'aka Managementtù Na-ahụ Maka Mberede Mberede Mba (NEMO).
Ọrụ njem nlegharị anya na nke ọdụ ụgbọ elu maliteghachiri n'ụtụtụ a.
Saint Lucia Air and Sea Ports Authority (SLASPA) na-akọ na Hewanorra International Airport (UVF) na George FL Charles Airport (SLU) maliteghachiri ọrụ nkịtị na 10 nke ụtụtụ a maka mbata na ịpụ ụgbọ elu. A na-agba ndị njem ume ka ha jiri ụgbọ elu ha chọpụta maka mmelite ha. N'ịgbalị imeziwanye oge nhazi, a na-agba ndị njem ume ịlele n'oge.
Saint Lucia Hospitality & Tourism Association (SLHTA) na-akọ na ụlọ nkwari akụ na ebe ntụrụndụ na-aga nke ọma na-enweghị mmebi ihe onwunwe. A na-eme mkpocha ịchọ mma na ụlọ ọrụ ndị metụtara njem. Ndị otu na-elekọta ụlọ na-elekọta ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ andụ andụ ma nwee nchebe n'ime ụlọ ntụrụndụ ha.
Ọnọdụ ifufe na mmiri ozuzo mere ka ụfọdụ mbibi gafee Saint Lucia ma a na-eweghachi ike na mpaghara ebe enwere ọpụpụ. Ewere okporo ụzọ okporo ụzọ ahụ ka ọ dị mma ịgafe site na Ngalaba Akụrụngwa. Enweghị akụkọ gbasara nkwụsị na mmiri.
Ministri Ahụike ga-anabata ihe na-adịghị mma nwa oge Covid-19 Ihe nyocha PCR rụpụtara karịa ụbọchị 5 maka ndị njem rutere Saint Lucia site na Sọnde, Julaị 4, 2021, naanị. Ntughari oge a bụ ịkwado ndị njem nke Ajọ Ifufe Elsa metụtara. Maka ozi ndị ọzọ gbasara usoro nzuzo Covid-19 na ịbanye na Saint Lucia, biko gaa www.stlucia.org/covid-19.